Ludovico Office Idrowa, Isitulo Kunye Nedesika Combo - Imagazini yoyilo
Idrowa, Isitulo Kunye Nedesika Combo
Idrowa, Isitulo Kunye Nedesika Combo Njengakwifenitshala ephambili yeLudovico, le nguqulo yeofisi ibonakalisa ukuba nomgaqo ofanayo wokufihla isitulo esipheleleyo kwisitulo esinesihlalo esingaphawulwanga, sithathwe njengenxalenye yefanitshala ephambili. Uninzi luya kucinga ukuba izitulo zezitshati ezimbalwa ngakumbi. Kuphela kuxa sibuyele ngasemva apho sibona isitulo siphuma ngokoqobo kwindawo enabantu abaninzi sigcwaliswe zizo. Isikhuthazo esikhulu sivela kutyelelo lwePittamiglio's caste nayo yonke imiyalezo yayo yokomfuziselo, efihliweyo kunye neengcango ezifihlakeleyo nezingalindelekanga okanye amagumbi agcweleyo.
Igama leprojekthi : Ludovico Office, Igama labayili : Claudio Sibille, Igama lomthengi : Sibille.
Idrowa, Isitulo Kunye Nedesika Combo Claudio Sibille Ludovico Office